Cillad ku timid Xarunta laga hago Droneska Maraykanka oo sababtay duqeyntii lagu dilay Askartii Galmudug. - iftineducation.com
Cillad ku timid Xarunta laga hago Droneska Maraykanka oo sababtay duqeyntii lagu dilay Askartii Galmudug.
iftineducation.com – Ciiddanka Cirka ee Maraykanka ayaa baaritaan ku haya cillad weyn oo ku timid Nidaamka Isku-xirka Kombiyuutarka ee Saldhigga Ciiddanka Cirka ee (Creech Air Force Base) oo Xarun u ah Maskaxda laga hago Hawlgalladda Dilalka ee loo adeegsado Duqeymaha Diyaaradaha Droneska ee laga fuliyo dalalka Caalamka.
Wargeyska BuzzFeed News ayaa ogaaday in Cillad xoogan ku timid Shabakadda Isku-xrika Kombiyuutarada laga hago Hawlgalladda Dilalka ee ay fuliyaan Droneska, iyadoo Diiwaanka Dowladda Maraykanka ee Qandaraasyadda lagu muujiyey inay cilladaasi bilaabantay bilowgii bishii hore ee September, isla markaana aan weli la dhamaystiran burburka ku yimid Nidaamka Maskaxeed ee SIPRnet ee laga hago Droneska loo adeegsado Dilalka iyo Duqeymaha.
Waaxda Federalka ee Diiwaanka Qandaraasyadda Maraykjanka ee fbo.gov. ayaa sheegtay in Nidaamka Kombiyuutada ee ku burburay Saldhigga Ciiddanka Cirka Maraykanka ee Creech oo loo yaqaano SIPRnet yahay nooc ka mid ah Nidaamka Internetka ee gudbin kara Sirdoonka Heerka Qarsoodiga ah, Bar-tilmaameesiga iyo Qabashadda Elektoroonikada.
Saraakiisha Milliteriga Maraykanka waxay kala xaqiijin waayeen in Fashilkaasi kuseeyo cillad Farsamada Gudaha, ama Inay Burcadda Internetka jabsadeen Nidaamka Isku-xirka Kombiyuutarada ee laga hago Duqeymaha Droneska.
Afhayeenka Ciiddanka Cirka Maraykanka, Major Malinda Singleton ayaa sheegay inay socdaan Baaritaanka lagu ogaanayo cilladaasi, wuxuuna ka gaabsaday inuu bixiyo Faahfaafin dheeraad ah.
Saldhigaasi ayaa waxaa loo adeegsadaa Khadadka Dayax-gacmeedka ku xiran Somalia, Syria, Afganistan, Pakistan iyo dalalka kale iyo Gantaalldda Dabka ee lala beegsado xubnaha Al-qacaida ama Daacish.
Danjiraha Maraykanka u jooga Somalia ayaa isagana Wada-hadal ka galay Baaritanka Duqeyntii ka dhacday duleedka Gaalkacayo ee lagu dilay Askar ka tirsan Ciiddanka Galmudug.